Qaramada Midoobay oo eedeyn u jeedisay Dowlada Congo | Universal Somali TV
Qaramada Midoobay oo eedeyn u jeedisay Dowlada Congo
Laamaha Amniga Congo iyo saraakiisha kale ee dowlada ayaa lagu eedeeyay in ay geesteen xadgudubyo ka dhan ah dadka rayidka,sida ay sheegtay Ms Michelle Bachelet oo qaramada midoobay u qaabilsay xuquuqda Aadanaha.
Waxaan soo jeedinayaa dowlada in ay soo joojiso tacadigaan ayay tiri Bachelet oo wareysi siineysay Raadiyaha Okapi oo ku hadla afka qaramada Midoobay ee fadhigiisu yahay magaalada caasimada ah ee Kinshasa.
Ms Michelle ayaa dhanka kale la kulantay madaxweyne Felix Tshisekedi, oo xilka kala wareegay bishii Janaayo ee sanadkii hore hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee soo mara Congo Mr Joseph Kabila.
Haweeneyda hey,ada qaramada midoobay u xilsaaran xuquuqda aadanaha ayaa Isniintii shalay soo afmeertay socdaal xog ogaal ah oo maalmihii la soo dhaafay ay ku joogtay wadanka Congo ee dhaca Bartamaha qaaradatan Afrika.
Madaxweynaha xilka haya ayaa dhankiisa balan qaaday in uu la dagaalami doono tacadiyada shacabka ay u geysanayaan ciidanka Amniga Congo.
Kan-xigaMaxkamad ku taal dalka Kenya oo xukun...
Kan-horeBukaan looga shakiyay caabuqa Corona ...
51,167,100 unique visits